Axmed Madoobe oo ka jawaabay xisaabcelinta DFS ay ka dalbatay maamulada (dhegayso) – Radio Daljir
Axmed Madoobe oo ka jawaabay xisaabcelinta DFS ay ka dalbatay maamulada (dhegayso)
Seteembar 9, 2018 11:30 b 0
Madaxwaynaha Jubaland Axmed Madoobe ayaa ka hadlay warqad codsi oo ay dhowaan soo saartay wasaaradda maaliyadda ee Soomaaliya oo lagu dalbaday inay xisaabcelin ay keenaan madaxda dowlad goboleedyada Soomaaliya.
Axmed Madoobe ayaa sheegay inuu warqadda xisaabcelinta lagu dalbanayo uu ku arkay baraha bulshada, oo ay dowladda gelisay, sida uu hadalka u dhigay, waxaana uu sheegay in baraha bulshada ay ku soo bandhigto lacagaha ay dowlad goboleedyada ay siisay.
Axmed Madoobe ayaa qiray lacag dhan hal milyan oo doolar maamul goboleedkasta in laga siiyay konton milyan oo dowladda Sacuudiga ay bixisay iyo shan boqol oo kun oo lagu siiyay madaxda maamul goboleedyada shirkii magaalada Baydhabo.
Isaga oo wasiirkiisa maaliyadda ugu baaqay inuu xisaabcelin u sameeyo dowladda oo uu geliyo baraha bulshada, isagoona sheegay arrinkan inay tuhun ku keenayso shacabka iyo madaxda dowlad goboleedyada.
OGEYSIIS Ogeysiis Ogeysiis: Carafaat Hospital Garoowe (dhegayso)